काे हुन् एमाले सचिवमा प्रदेश २ का २ आकांक्षी?
Home cpn uml काे हुन् एमाले सचिवमा प्रदेश २ का २ आकांक्षी?
बिहिबार, मंसिर ९, २०७८ १२:१८
जकपुरधाम – नेकपा एमालेको १०औँ महाधिवेशनमा प्रदेश २ बाट दुई दर्जनभन्दा बढी नेताहरु उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्। महाधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। तर प्रदेश २ का नेताहरु खुलेर महाधिवेशनमा आफ्नो उम्मेदवारीबारे बोल्न चाहिरहेका छैनन्।
प्रदेश २ बाट महासेठ र साह सचिव पदमै लड्ने भएपछि ओलीलाई दुईमध्ये एकलाई रोज्न समस्या हुने देखिएको बताइन्छ। महासेठले नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुबाट राजनीतिक जीवन सुरु गरेका थिए। सुरुमा पार्टी राजनीतिमा खासै सक्रियता नदेखाएका उनको प्रभाव पछिल्लो समय एमालेमा बढ्दै गएको छ। पछिल्लो एक दशकमा उनले सांसद हुँदै उपप्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रा गरिसकेका छन्।
बीआइटी कलेजबाट इन्जिनियरिङको अध्ययन गरेका महासेठ इलाममा एमालेको राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए। महासेठले इलाममा एमालेको सचिव भएर काम गरिसकेको धनुषाका नेताहरु बताउँछन्। इलाममा रहँदा झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसँग उनको सम्पर्क बढ्दै गएको थियो। पछि नेपालकै पैरवीमा महासेठ उदयपुर सिमेन्टका जीएम बनेका थिए।